जनप्रतिनिधिमा सवारी मोह: ससुराली जानदेखि श्राद्द खानसम्म सरकारी साधन | Jillakhabar.com
देश अहिले संघियतामा गएर कार्यन्वयनमा आएको पनि ४ बर्ष बितिसकेको छ । हिजोको १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ बिकास क्षेत्र अहिले ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला भएको छ भने अधिकार स्वयत्तताको हिसाबले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बिभाजन भएको छ ।
हिजोको एकिकृत सरकार अहिले ३ तहमा बिभाजन भएको छ अर्थात हिजो सिंहदवारको सरकार आज गाउँ वा नगरसम्म पुगेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र भनेर ३ तहमा बिभाजित सरकारले देशलाई कायापलट नै गर्लान् कि भन्ने धेरैको आशा थियो ।
अझ गज्जब त कहाँ भयो भने हामीले हाम्रो सरकार आफैँ छान्न पाएका थियौँ । हामीले सरकार छान्यौँ, सिन्दुरजात्रा गर्यौँ डोली चढाएर गाउँशहर पनि घुमाएयौँ र राजगद्दी सुम्पियौँ । अहिले उनिहरुले राजगद्दी सम्हालेको पनि चारबर्ष बितिसकेको छ । अब उनिहरुको समय एकबर्ष पनि बाँकी छैन ।
हिजो चप्पलमा आएका जनप्रतिनिधिले जनतामा ठुलै बिकासका सपना देखाएका थिए । त्यही गाउँले परिवेशमा हुर्केका जनप्रतिनिधिहरु अहिले चिल्ला गाडी चढेर जनताको मुखभरी छारो (धुलो) पर्नेगरी हुईँकिन्छन् ।
हाम्रो सरकार अर्थात स्थानीय जनप्रतिनिधि । हाम्रो आफ्नै भाई भारद्धार जो हाम्रो राज्यलाई चलाउन चुनिए । आफ्नै ठाउँको मान्छे जसले यो परिवेशलाई मज्जाले नियालेको छ बुझेको छ । यहाँका प्रत्येक जन जनको मनमा छ । भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक लगाएत सबैकुरा उसलाई थाहा छ । उ भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधि ।
अब उसलाई यहाँको बिकास गर्न कस्ले छेक्छ र ? उसलाई राजगद्दीमा राज गराएर जनताले के गल्ती गरे ? सायद जनताले यही महुुशुस गरेका थिए । हिजो चप्पलमा आएका जनप्रतिनिधिले जनतामा ठुलै बिकासका सपना देखाएका थिए । त्यही गाउँले परिवेशमा हुर्केका जनप्रतिनिधिहरु अहिले चिल्ला गाडी चढेर जनताको मुखभरी छारो (धुलो) पर्नेगरी हुईँकिन्छन् ।
जनताको लागि विकास गर्न चढेको गाडीले जनतामा ठुलो आशा जाग्छ तर अहिले मोहित भएर चढेको गाडी साँच्चै जनताकै लागि हो त ? छात्तीमा हात राखेर जनप्रतिनिधिहरुको मनले स्विकार्न नसक्ला की जनताको काममा मात्रै गाडीको प्रयोग भएको छ ।
कार्यलयका काम भन्दा बाहेक यता र उता हिड्नका लागि प्रयोग भएको साधन जनताका लागि अत्यावश्यक खाद्यन्न बोकेर गाउँ गाउँका विकट ठाउँ गए जनताले स्थानीय सरकारलाई कत्ति राम्रो मान्थे होला ?
एकाध र अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको गाडी कार्यलय प्रायोजनका लागि मात्रै प्रयोग नै भएको छैन । कानुनतः हेर्ने हो भने स्थानीय तह वा जो सुकैले प्रयोग गर्ने सवारी कार्यलय प्रयोजनको लागि मात्रै हुनुपर्छ तर पार्टी निकटको कार्यक्रममा रिवन काट्नेदेखि घर आउजाउ गर्नपनि सेतो प्लेटकै सवारी प्रयोग हुन्छ ।
झण्डै एउटा वडाको विकास वजेटजती त सवारीको ईन्धनमा मात्रैै खर्च छुट्याईन्छ प्रायः सरकारी तहमा । यसबाट जनतामा झन् निराशा बढीरहेको छ । ससुराली जानदेखि श्राद्द खानसम्म सरकारी गाडी प्रयोग भएको अधिकांश स्थानीय तहहरु छन् ।
यसबाट जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? बिकासको विगुल फुक्नेहरुले नै सरकारी सम्पती र जनताको करलाई यसरी धुँवामा उडाएपछि जनताले अब कसको आशा गर्ने ? रिवन काट्न प्रयोग हुने सरकारी गाडी एम्बुलेन्स् नहुँदा उपचार गर्न नभ्याएर मर्ने जनताका लागि प्रयोग भए कति राहत हुन्थ्यो होला ? कार्यलयका काम भन्दा बाहेक यता र उता हिड्नका लागि प्रयोग भएको साधन जनताका लागि अत्यावश्यक खाद्यन्न बोकेर गाउँ गाउँका विकट ठाउँ गए जनताले स्थानीय सरकारलाई कत्ति राम्रो मान्थे होला ?
अनावश्यक प्रयोग भएका ईन्धनको पैसाले एक छाक टार्न नसक्ने निमुखाको भाँडोमा एक लिटर खाने तेल भरिदिए कस्तो होला ? यो कुरा मेरो सरकारलै खोई सोचेको ? मोहमा लालाहित हुँदा हुँदै आफ्नो कार्यकाल फुस्सै गैसक्छ अनि विकासको नारा लगाउन किनेको विगुल कतिबेला बजाउने ? धेरै लालाहित नबनौँ हिजोपनि गाईगोठबाट उठेर आएका हामी भोली पुग्ने त्यहीँ हो ।
हामी तपाईँलाई देखेर लजाउन चाहँदैनौँ । कृपया यो हर्कत गरेर हामीलाई नै लज्जित बन्ने अवसर नदिनुहोला ।
हेर्नुस् त हाम्रो ठाउँमा विकास गर्न अझ कत्ती काम बाँकी छ ? ठुलो सपना नदेख्नुस्, गरिवले २ छाक आनन्दसंग खान पाओस्, दुई कौडीको भाउमा श्रमबेच्न कसैले नपर्योस्, आधारभुत आवश्यकता अभाव नहोस्, यत्ती सोचे पुग्छ । जनतालाई कडासंग परिचालन गर्नुस् ताकि उनिहरु आँफै आत्मनिर्भर बनुन् । तपाईँलाई उनिहरुले भोट दिएका हुन् पैसाको बिटो होइन । बिकास गर्न पैसा चाहिन्छ भोट मात्रैले पुग्दैन यो कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाउनुस् न महाराज ? आफ्नो ठाउँको जनतालाई नै मज्जाले परिचालन गराउनुस् आफ्नो ठाउँ बिकास गर्न जनता पछि पर्दैनन् । तपाईकै महत्वकांक्षी आशाले हो जनता बिग्रको यो तपाईले सोच्नुभयो कहिलै ? अलिकती विकासवादी सोच लिएर अगाडी बढ्न सके ठाउँ बन्ने आफ्नै हो फाईदा आफैलाई हो ।
गाडी चढौँ तर लालाहित नबनौँ । आजको मोहले भोलीलाई हानी गर्नसक्छ । आज सरकारी गाडी जढेर देखाइएको स्टानडर्ड पदच्युत भएपछि पनि बचाउन सकिन्छ होला ? आज चिल्लो गाडीमा सवार मान्छेलाई भोली तनावाला चप्पल र हाफ पाईन्टमा त्यही गाउँको भेलामा देख्न पर्दा तपाईहरुलाई भन्दा बढी जनतालाई नै लाज लाग्छ होला है ? हामी तपाईँलाई देखेर लजाउन चाहँदैनौँ । कृपया यो हर्कत गरेर हामीलाई नै लज्जित बन्ने अवसर नदिनुहोला । किनकि तपाईँले हाम्रो चाहना कहिलै पुरा गर्नुभएको छैन ।
Previous articleपोष्ट कोभिडका बिरामी बढ्दै, निमोनियाका बिरामी धेरै- के हाे पाेष्ट काेभिड ?
Next articleमनसुनी वायुको प्रभावः मंगलबार सम्म देशभर भारी वर्षा हुने,सतर्क रहन आग्रह